Glazov Aqoonsiga Shirkadu - Joornaalka Naqshadeynta
Aqoonsiga Shirkadu Glazov waa warshad alaabta guryaha ah oo ku taal magalo isku magac ah. Warshadu waxay soo saartaa alaabo rakhiis ah. Maaddaama naqshadeynta alaabta guryaha noocaas ahi tahay mid guud, waxaa la go'aamiyay in lagu saleeyo fikradda isgaarsiinta ee xarfaha "alwaax" asalka ah, ereyada ka kooban xarfaha noocan oo kale ah waxay astaan u yihiin gogosha guryaha. Waraaquhu waxay ka kooban yihiin ereyo "alaabta guriga", "qolka jiifka" iwm ama magacyada aruurinta, waxaa loo meeleeyay si ay ugu ekaadaan gogo 'alaabta guriga. Waraaqaha 3D-tilmaameysan waxay la mid yihiin qorshayaasha guryaha waxaana loo adeegsan karaa qalabka agabyada ama sawirrada asalka ah ee aqoonsiga sumadda.
Magaca mashruuca : Glazov, Magaca naqshadeeyayaasha : Mikhail Puzakov, Magaca macmiilka : Glazov furniture factory.
Aqoonsiga Shirkadu Mikhail Puzakov Glazov